Leadership - Sorrento Therapeutics
Filoham-pirenena, filoha ary tale jeneraly
25+ taona traikefa amin'ny indostrian'ny bioteknolojia sy ny siansa momba ny fiainana
Dr. Ji dia niara-nanorina an'i Sorrento ary niasa ho tale nanomboka tamin'ny 2006, tale jeneralin'ny filoha ary filoha nanomboka tamin'ny 2012, ary filoha nanomboka tamin'ny 2017.
Nandritra ny fotoana niasany tao amin'ny Sorrento, dia nanamboatra sy nitarika fitomboana mahagaga an'i Sorrento tamin'ny alàlan'ny fahazoana sy fampivondronana ao anatin'izany ny Bioserv, Scilex Pharmaceuticals, Concortis Biotherapeutics, Levena Biopharma, LACEL, TNK Therapeutics, Virttu Biologics, Ark Animal Health, ary Sofusa Lymphatic Delivery.
Niasa ho Lehiben'ny Siantifika an'i Sorrento nanomboka tamin'ny 2008 ka hatramin'ny 2012 ary tamin'ny naha CEO vonjimaika azy nanomboka tamin'ny 2011 ka hatramin'ny 2012.
Talohan'ny Sorrento dia nitana toerana mpanatanteraka ambony tao amin'ny CombiMatrix, Stratagene izy ary nanangana ny Stratagene Genomics, sampana an'ny Stratagene, ary niasa ho Filohany & Tale Jeneraly ary Talen'ny Birao.
BS sy Ph.D.
Dr. Royal dia mpanatanteraka pharmaceutique manana 20 taona nivoatra ara-pitsaboana sy ara-pitsaboana. Vao haingana izy no lehiben'ny mpitsabo ao amin'ny Suzhou Connect Biopharmaceuticals ary, talohan'izay, Concentric Analgesics. Niara-niverina tamin'i Sorrento izy izay naha-EVP azy teo aloha, Fampandrosoana klinika ary raharaha ara-dalàna tamin'ny taona 2016.
Izy dia tompon'andraikitra na nandray anjara tamin'ny NDA nahomby, anisan'izany ny NCEs, 505(b)(2)s ary ANDAs
Dr. Royal dia manana mari-pahaizana momba ny fitsaboana anatiny, fanafody fanaintainana, fanatoranana miaraka amin'ny fepetra fanampiny amin'ny fitantanana fanaintainana, fanafody fiankinan-doha ary fitsaboana ara-dalàna
Izy dia Profesora mpanampy amin'ny fitsaboana ao amin'ny Uniformed Services University of Health Sciences, Assistant Professor of Anesthesiology/Critical Care Medicine ao amin'ny University of Pittsburgh Medical Center, ary Profesora Adjunct ao amin'ny University of Oklahoma sy University of California San Diego.
Namoaka be dia be izy miaraka amin'ny toko boky 190 mahery, lahatsoratra nodinihin'ny mpiara-mianatra ary abstract / afisy; ary nandray fitenenana nasaina tamin’ireo fivoriana nasionaly sy iraisam-pirenena
Raharaha ara-dalàna ny filoha lefitra zokiny
Dr. Brunswick dia manana toerana ambony 35 taona mahery ao amin'ny Indostria voafehy ao anatin'izany ny 9 taona mahery ao amin'ny US FDA, Center for Biologics, Division of Monoclonal Antibodies.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Sorrento, Dr. Brunswick dia Lehiben'ny Regulatory Affairs sy Quality tao amin'ny Sophiris Bio, orinasa iray namolavola fanafody ho an'ny hyperplasia prostate malemy sy homamiadan'ny prostaty. Talohan'izay dia izy no lehiben'ny Regulatory Affairs tao amin'ny Arena Pharmaceuticals manokana momba ny fitsaboana amin'ny G Protein receptors.
Dr. Brunswick no nitarika ny vondrona mpandrindra ao amin'ny Elan Pharmaceuticals mifantoka amin'ny aretin'i Alzheimer sy ny fitambaran'ny fanaintainana, ziconotide.
Filoha lefitra ambony R&D
Dr. Allen dia nandany 15 taona mahery tao amin'ny indostrian'ny bioteknolojia nitarika ny fikarohana, ny fampandrosoana mialoha ny klinika, ary ny famokarana klinika voalohany amin'ny fitsaboana antiviral sy miady amin'ny homamiadana.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Sorrento, Dr. Allen dia talen'ny siantifika ao amin'ny Oregon Translational Research and Development Institute (OTRADI), niara-niasa tamin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny indostria sy akademika momba ny fikarohana zava-mahadomelina sy ny fampielezan-kevitry ny kandida mikendry ny homamiadana hematologika, fivontosana mafy ary otrikaretina areti-mifindra.
Talohan'ny OTRADI, Dr. Allen dia namolavola fandaharan'asa fikarohana tao amin'ny SIGA Technologies izay namaritra ny antiviral mivantana mikendry ny viriosy ao amin'ny fianakaviana bunyavirus sy filovirus ary koa ny fanoherana ataon'ny mpampiantrano amin'ny viriosy olombelona marobe ary mitaky bakteria ao anaty sela.
Dr. Xu dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny maha mpanatanteraka ny indostrian'ny biotech. Dr. Xu dia mpiara-manorina, filoha ary Tale Jeneralin'ny ACEA Biosciences (nahazo ny Agilent tamin'ny 2018) ary ACEA Therapeutics (nahazoan'ny Sorrento Therapeutics tamin'ny 2021). Miditra izy Sorrento Therapeutics taorian'ny fahazoana azy, ary mbola miasa amin'ny maha-filohan'ny ACEA, sampana iray an'ny Sorrento Therapeutics.
Izy dia nitantana sy tompon'andraikitra amin'ny fampivoarana fantsona fanafody vaovao amin'ny ACEA, fandalinana klinika ary trano famokarana cGMP.
Izy no mpiara-mamorona ny teknolojia fitiliana sela maimaim-poana amin'ny marika ary tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny teknolojia/vokatra sy ny fiaraha-miasa amin'ny Roche Diagnosis, ny varotra manerantany ny teknolojia sy ny vokatra azo avy amin'ny ACEA, ary ny fahazoana Agilent $250 tapitrisa ny ACEA Biosciences.
Izy dia mpanadihady mpiasa sy mpahay siansa mpikaroka ao amin'ny Gladstone Institutes, The Scripps Research
Institiota sy ivontoerana amerikana momba ny fanaraha-maso sy ny fisorohana ny aretina. Manana patanty amerikana 50 mahery izy ary
fangatahana patanty ary namoaka lahatsoratra fikarohana 60 mahery tamin'ny gazety iraisam-pirenena, anisan'izany
Siansa, PNAS, Nature Biotechnology, ary Chemistry sy Biology.
BS, MS ary MD
Ny filoha lefitra zokiny momba ny asa ara-barotra
Dr. Sahebi no mitarika ny asa ara-barotra ao Sorrento
Mitondra traikefa momba ny fanafody 30 taona mahery ao anatin'izany ny siansa momba ny varotra sy ny paikady ara-barotra any Sorrento
Talohan'ny nidirany tamin'i Sorrento, dia nitana toerana ambony izy niaraka tamin'i Novartis, Pfizer, ary Lilly namolavola fanadihadiana ara-barotra sy paikady ara-barotra mifototra amin'ny angon-drakitra tompon'andraikitra amin'ny fitomboan'ny varotra vokatra mihoatra ny 20 mahatratra ny sata blockbuster amin'ny sehatry ny Cardiovascular, Arthritis, Neuroscience, Diabetes, ary Oncology.
Mpino mafy orina fa ny kolontsaina miara-miasa dia mamorona ekipa mpandresy
Filoha teo aloha, Fikambanan'ny Siansa Fitantanana Pharmaceutical of America
BA, MBA ary Ph.D.
Filoha lefitra mpanatanteraka, Lehiben'ny Fitantanam-bola, Lehiben'ny fandraharahana
Ramatoa Czerepak dia manana 35 taona mahery amin'ny fitantanam-bola sy ny fahaizana miasa manerana ny fanafody, ny bioteknolojia ary ny renivohitra. Vao haingana izy no EVP sy Lehiben'ny Fitantanam-bola ao amin'ny BeyondSpring Inc., orinasa eran-tany momba ny onkologie. Talohan'izay dia niasa ho Lehiben'ny Fitantanam-bola sy Lehiben'ny Orinasa momba ny Genevant Sciences izy, orinasa mpanatitra lipid nanoparticle, ary tompon'andraikitra ara-bola ho an'ny biotechs maro hafa. Ramatoa Czerepak dia manana traikefa 10 taona amin'ny fampiasam-bola amin'ny fampiasam-bola amin'ny maha Tale mpitantana teo aloha ao amin'ny Bear Stearns sy JPMorgan, ary mpiara-miombon'antoka jeneralin'ny Bear Stearns Health Innoventures LP Ramatoa Czerepak dia nanomboka ny asany tamin'ny 18 taona tao amin'ny fivarotam-panafody lehibe amin'ny toeran'ny mpitarika ambony ao. ara-bola, drafitra stratejika, fampandrosoana ny fandraharahana ary ekipa fanombohana ara-barotra. Izy no nitarika ny fikarohana mpiara-miombon'antoka manerantany ho an'ny D2E7 (Humira®), izay niafara tamin'ny fivarotana BASF Pharma tamin'i Abbott tamin'ny $ 6.9 lavitrisa. Nandray anjara lehibe tamin'ny fahazoana an'i Roche ny Syntex ho an'ny $ 5.4 lavitrisa izy. Nandritra ny taona maro dia nandray anjara tamin'ny fanangonam-bola an-jatony tapitrisa dolara ho an'ny orinasa biotech tamin'ny alàlan'ny fitarihana fampiasam-bola izy, ary tamin'ny alàlan'ny fandraisany anjara amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny CFO sy ny Birao. Ramatoa Czerepak dia manana mari-pahaizana BA magna cum laude amin'ny fampianarana espaniola sy matematika avy amin'ny Marshall University, MBA avy amin'ny Rutgers University, ary mari-pankasitrahana ho an'ny talen'ny orinasa avy amin'ny Harvard Business School.
Ny filoha lefitra zokiny, ny fifandraisana amin'ny orinasa ary ny fifandraisana amin'ny mpampiasa vola
30+ taona traikefa amin'ny indostrian'ny biopharmaceutical sy ny siansa momba ny fiainana
Atoa Cooley dia nitana toerana isan-karazany momba ny varotra, ny varotra, ary ny fitarihana ara-barotra tao amin'ny orinasa 500 fortune ary nitarika fanangonam-bola mahomby sy fanombohana ezaka ho an'ny orinasa teknolojia momba ny fahasalamana.
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Sorrento, Andriamatoa Cooley dia nitarika ny ezaky ny famokarana vokatra vaovao eran-tany miaraka amin'ny andraikitry ny P&L ao amin'ny Eli Lilly sy Company ary Genentech amin'ny faritra misy aretina ao anatin'izany ny Diabeta, Neurology, Immunology ary Aretina tsy fahita firy.
Fanampin'izany, nitarika ezaka lehibe BD, in-licence, ary fampidirana na iraisam-pirenena sy tany Etazonia ihany koa izy. Ny agonista GLP-400 voalohany
Vao haingana, Andriamatoa Cooley dia CBO ho an'ny Sofusa Business Unit ao amin'ny Kimberly-Clark ary nitarika ny varotra mahomby sy ny fampidiram-bola Sorrento Therapeutics. Manohy mitarika ny fizarana rafitra fanaterana fanafody Lymphatic ao Sorrento izy.
Filoha lefitra Fampandrosoana ny fandraharahana
30+ taona traikefa amin'ny Business Development, Sales ary ny ezaka lehibe amin'ny fikarohana zava-mahadomelina, fampandrosoana ary fiaraha-miasa
Talohan'ny nidirany tao amin'ny Sorrento, Mr. Farley dia nitana ny toeran'ny mpitarika tao amin'ny HitGen, WuXi Apptec, VP of Key Accounts building ary nitarika ekipa BD manerantany; ChemDiv, VP an'ny BD ao, nitarika ezaka maro hamorona orinasa fitsaboana vaovao amin'ny CNS, Oncology ary Anti-infectives.
Andriamatoa Farley dia mpanolo-tsaina ho an'ny ekipa mpitantana mpanatanteraka sy BOD isan-karazany mba hamolavola sy hampiroborobo ny fananana ara-barotra miaraka amin'ny toa an'i Xencor, Caliper Technologies ary Stratagene.
Nanangana tambajotra matanjaka manerana ny orinasa pharmaceutique, biotech ary ny vondrom-piarahamonina Venture Capital izy. Ingahy Farley dia nandray fitenenana nandritra ny fihaonambe maro ary navoaka tamin'ny gazety isan-karazany nojeren'ny namana
Ny filoha lefitra zokiolona Neurotherapeutics BU
Dr. Nahama dia mitarika fandaharanasa RTX momba ny fampivoarana zava-mahadomelina momba ny fahasalaman'ny olombelona sy ny biby
Amin'ny maha ekipa mpitarika mpikambana azy, Dr. Nahama dia manohana ny fampivoarana paikady, manara-maso ireo tetikasa manan-danja, manamora ny fanomanana ny tsena ary mikolokolo ny ezaka fiaraha-miasa ivelany.
Mamporisika ny fahafahana mandika teny hanafaingana ny fandaharan'asa fampandrosoana ny olombelona sady mitondra teknolojia izay tsy ho azon'ny biby fiompy.
Talohan'ny nidirany tao Sorrento dia nandany 25 taona mahery izy nitana andraikitra mpanatanteraka maneran-tany niasa tao amin'ny Life Sciences and Biotechnology ho an'ny Sanofi, Colgate, Novartis, Merck, VCA Antech ary VetStem Biopharma.
DVM miaraka amin'ny asa aloha dia mifantoka amin'ny R&D amin'ny faritra fanaintainana (fitsapana klinika ho an'ny biby fiompy)